Nanolotra fiara mpitondra marary 2 arifomba sy fitaovam-pitsaboana manodidina ny 550 tapitriasa Ariary ho an’ny Hopitalim-panjakana (CHRD) ao Moramanga sy ny Service Medical Inter-entreprises de Moramanga (SMIMO) indray ny Orinasa. Tohin’ny hetsika samihafa efa notanterahin’Ambatovy ho fanohanana ity CHRD ity izao ary tafiditra anatin’izany ihany koa ny fanomezana fandriana ho an’ny hôpitaly. Tanjona ny hanatsarana ny asa atao amin’ny toeram-pitsaboana mba ahafahan’ireo mpitsabo mandray an-tanana ireo marary araka izay haingana. Iray amin’ireo tetikasa izay novatsiana tamin’ny alalan’ny Tahirin’Ambatovy ho an’ny tetikasa sosialy (FIS) ity fanomezana ity. Mitentina 25 tapitrisa dolara izany ary natokana hanaovana fotodrafitrasa sy hamatsiana ireo tetikasa sosialy. Miisa 17 ny tetikasa ao anatin’ny FIS ary efa vita tamin’ny taon-dasa ny ankamaroan’ireo vokatry ny fiaraha-miasa nisy teo amin’Ambatovy sy ireo manampahefana isan-tsokajiny.